Aqoonkaab Saamaynta Dhaqaale Ee sakada | Aqoonkaab
Saamaynta Dhaqaale Ee sakada
May 30, 2016Dhaqaalaha
Waxa Alla (SWT) ku waajib yeelay qof kasta oo muslim ah oo hanti seka-goys ah haysta inuu xad cayiman oo hantidiisa ka mid ah siiyo dadka faraha madhan.
Marka laga yimaado saameynta ruuxiga ah, ta bulsheed iyo ta diimeed ee Sekadu leedahay ayaa waxa u weheliya saameyn dhaqaale oo aan ku kobnayn saboolka keliya balse saameyn togan ku leh heerka dhaqaale ee wadamada dabbaqa nidaamka sekeda. Nidaamka dhaqaale ee Islaamka oo ah mid u dhaxeeya nidaamyada hanti-wadaaga iyo hanti-goosadka, wuxu aqoonsan yahay in qofku leeyahay xuquuqda mulkiyeed oo gaar ah isla markaana ay saaran tahay masuuliyad bulsheed. Qoraalkan kooban waxaynu ku eegi doono saameynta Sekadu ku leedahay heerka saboolnimo, shaqa la’aanta, saami-qeybsiga dhaqaalaha iyo dhinacyada maalgashiga.
SEKEDA IYO SABOOLNIMADA:
Xikmadda Alle sekeda uwaajib yeelay ayaa ah inay heerka saboolnimadu hoos udhigto madama ay tahay waajib lacageed oo saboolku ku leeyahay kuwa hantidoodu gadhay heerkii seko-goyska. Inkastoo madaahibta ku kala duwanyihin xadiga sekeda ee la siinayo masaakinta ayaa waxay ka siman yihin in la siiyo wuxu ku baahi baxo tusaale ahaan madhabka maalikiyada iyo xanaabiladu waxay dhigayaan in qofka la siiya wax ku filan muddo sannad ah isaga iyo inta uu quudkooda ka masuul yahay sida carruurtisa iyo xaaskiisa madama Sekadu tahay waajib sanadle ah taaso hoos udhigaysa heerka baahida dadkaan waxba haysan isla markaasna kor uqaadeysa heerka nololeed ee ay ku noolyihiin. Nidaamka aynu isticmaalo ayaa ah mid gabi ahaanba ah mid ka duwan kaas iyadoo waxyaabaha loo aaneeyo inaynaan dabbaqin ay ka mid tahay maqnaashiyaha doorkii dawladda iyo kala badnaanshiyaha xadiga sekeda iyo tirada dadka baahan. Isku soo duuduub, habka aynu isticmaalno sekeda ee ah in qofka la siiyo wax yar guud ahaan ma ahan mid ka dhabeenaya xikmadihii sekeda loo wajib yelay oo ah in saboolku sakada ku caydh baxo
SEKEDA IYO SHAQA LA’AANTA:
Siddeeda kooxood ee ah dadka sekadu ku baxayso waxa ka mid ah qofka deynka lagu leeyahay ee aan awoodin inuu iska bixiyo tusaale ahaan hadii qof ganacsato ahi lacag deynsado awoodna uyeelan kari waayo inuu bixiyo Sekadu waxay usuurta galineysaa inuu iska bixiyo ganacsigisana sii wato dadka ushaqeeyana anay shaqa la’aaan ku dhicin . Marka heerka saboolnimo yaraato taas oo ay Sekadu ka qayb qaadato sideynu kor kusoo sheegney, waxa kordhaya heerka ‘isticmaalka’ (consumption) ee dadka waxana kordhaya rabitaanka iyo dalbashada alaaboyinka taaso kor uqadeysa wax-soosarka. Marka kastoo wax-soosarka kor u kaco waxa iyana la kordhaysa heerka shaqaaleynta si loo daboolo baahiyaadka suuqa.
Dadka sekadu ku baxayso waxa iyaguna kamid ah shaqaalaha sekeda. Madaama sekadu laftarkeedi ay shaqaalaysiinayso dad. Waxaynu odhan karnaa iyada laftarkeeda ayaa ka qayb qaadanaysa shaqo abuurka. Sekadu waxay sidoo kale kor uqaade awooda iyo kartide shaqe ee dadka madama dadka caydha iyo saboolki awood uyeelanayaan inay helaan lacag ay ku dabooli karana bahiyaadkoda asasiga sida cuntada iyo dawada taaso kor uqaadeysa awoodda jidheed ee shaqo qabitaan.
SEKEDA IYO SAAMI-QAYBSIGA BULSHO:
Sideynu ogsoonahay saami-qaybsiga dhaqaale ee bulsho wuxu ka qayb qaata kobaca dhaqaale sekaduna wa hab ka mid ah hababka loo adeegsan karo isu dheelitirka dhaqaale. Islaamku wuxu kala dagaalamay bulshada dabaqadaha iyo kala sarraynta dhexdooda ah. Sekadu waxay kor uqaadaa quudashada iyo waxsoosaarka guud ahaan bulshada madaama danyartu heleyaan waxay masruufsadaan waxaana bata wax iibsigooda taaso kor uqaadeysa waxsoosarka wershadaha ugu danbeyn kobac uu ku imanayo dakhliga iyo heerka dhaqaale bulsho. Waxa iyana taas raacda madaama nidaamku sekadu yahay mid sannadle ah kuna waajib yeelay Alle badi noocyada kala duwan ee hantida iyo xoolaha, waxay taasi ka dhigeysaa in sekedau tahay nidaamka ugu wanaagsan ee saami qaybsi. Hadaba si nidaamkani u hirgalo waxa wajib ah iney dawladu ka qayb qadato ka shaqeynta, ururinta iyo qaybinta sekeda si ay si siman oo cadaalad ah uwada gaadho dhamaan kooxihi loogu tala galay sekada.
SEKEDA IYO MAALGASHIGA:
Sekeda waa nidaam dadka ku boorinaya iney maalgashadaan madaama haddi kale hantida kaydsanka Sekadu dhamaynayso Islaamkuna waa mid ku dhiiri-gelinaya musliminta inay ganacsi iyo maalgashi xalaala la yimadaan si faaidadoodu ugu badato xadiga la bixinayo ee sekeda ee ka go’aya raasamaalkooda.
khitam A. hassan Amawim (2010) , role of zakat in economic development
www.studylecturenotes.com\_economic advantages and benefits of zakat
W\_Q : Najah khadar yonis
Previous PostHabkee u dooranaysaa kulliyada aad jaamacadda ka gelaysid ? Next PostSaamaynta Ganacsiga Xorta ahi ku leeyahay Wadamada aanu ganacsigoodu gaashaan qaadin